Mhan'arira mamilionea chitsotsi muApple application chitoro | IPhone nhau
Mune ino kesi tinosangana nechichemo chakaitwa naKosta Eleftherioum, mushambadzi anozivikanwa weshandisa weApple application chitoro. Mune ino kesi, muna Kukadzi XNUMX, mugadziri akavhura tweet maakataura izvi kunyunyuta nenzira yeruzhinji.
Uyu aive asiri iye oga mushambadzi akataura dambudziko iri muchitoro chekushandisa cheCupertino firm, vamwe vakabatana nekunyunyuta nezve zvinoshandiswa zvakagadzirwa nevashandisi uye zvinoshamisa kuti, vanowana chinzvimbo chiri nani muchitoro pane chepakutanga.
Iyi ndiyo yaive iyo tweet yakaburitswa naElethertherioum, iyo kukakavadzana kwakafukunurwa munzvimbo inozivikanwa pasocial network:
VANHU, TAKazviita !!
Isu takavhenekera mwenje pane aya matsotsi, uye Apple YAKAVADZISA PASI! 👏
Nhau dzakaipa? https://t.co/bSZuCpyZbk
Midhiya senge vava kuda Nhau dzakakurumidza kubata uye isu takamirira mhinduro inogona kubva kuApple. Ichi chinhu chinonzwika kwatiri mune zvimwe zvikamu zve network uye ndizvo ivo vanogunun'una pamusoro pekutenga zvakanaka ratings uye ongororo kuti vakwire kunzvimbo dzepamusoro kutarisira kuburitsa kunyange iwo ekutanga maficha akagadzirwa nevagadziri ava.
Vamwe vanogadzira vanokanganiswa nemaitiro akaipa aya ndiMarco Arment anozivikanwa, musiki weInstapaper uye Overcast, uyo akayambirawo nezvesangano iri ravanoshandisa mafomu ekutanga kuteedzera maapp uye kutenga mavhoti. Nenzira iyi mushandisi anovimba uye anotenga iyo app iyo isina mutengo wakakwira seyakatanga asi zviri pachena kana achiishandisa anoona kuti ruzivo rwevashandisi harugutse sezvingatarisirwe asi nguva yapera, akatenga app. Zviripachena iwe unogona kukumbira kudzoserwa kweiyo app asi kazhinji kacho mushandisi haazive kuti izvi zvinogona kuitwa uye chitsotsi chinopihwa.
Shure kwaizvozvo, Arment, yakatangisa tweet ichikumbira Apple kuti ibvise maapplication ayo anowedzera kunyoreswa kwevhiki nekuti ivo vanowanzo kuve tarisiro huru yevatsotsi
Apple inogona kudzivirira ZVAKAWANDA App Store inotsausa-kunyorera chitsotsi kana vakabvisa kubhadhara kwevhiki senge sarudzo.
Iyo ipfupi pfupi yekunyoresa nguva inofanirwa kuve yemwedzi wega, nekuti ndomafungiro evatengi pamusoro pemitengo iri kuenderera. (Ndicho chikonzero nei vhiki yega yega ichitsausa vazhinji!)
Iva sezvazvingaita bhizinesi rezvishandiso, podcast, YouTube mavhidhiyo, Instagram, nezvimwewo, fambisa mari yakawanda uye kutenga kweongororo, vateveri kana mavhoti chinhu chinowanzoitika. Zvingave zvakanaka kuti ukwanise kuibvisa sezvo kumagumo kune mamirioni ema euro / madhora anorasikirwa nevakagadziri vechokwadi, asi izvi zvakaoma kubata.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » App store » Mhan'ara miriyoni-madhora chitsotsi muApple application chitoro
Mhinduro gumi nembiri yeSouth yekugadzirisa tambo inonzi SurfaceSnap